Methyltrienolone အမှုန့် (965-93-5) ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း - စက်ရုံ
ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့် (965-93-5)
Methyltrienolone အမှုန့်ကြွက်သားရောဂါအတွက်အကောင်းဆုံး steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ Methly trenbolone ထိပ်တန်းကြွက်သားထုတ်ကုန်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်။ Metribolone အစဉ်အဆက်ကိုထုတ်လုပ်အင်အားအကောင်းဆုံးပါးစပ်ဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့် (965-93-5) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့် (965-93-5) ဖျေါပွခကျြ
ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့်ဆင်းသက်လာတဲ့17α-alkylated nandrolone (19-nortestosterone) ဖြစ်ခြင်းအနေနဲ့နှုတ်တက်ကြွဟို-အန်ဒရိုဂျင် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးနှင့်၎င်း၏ခိုင်မာတဲ့အန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့အသည်းအဆိပ်တစ်ဦးဓါတ်ဖြည့်စွက်အဖြစ်ရောင်းစားခြင်းမရှိပါ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့မကြာခဏထဲကဓာတုပစ်စညျးလေ့လာမှုများအဘို့အတွက်စသည်တို့ဇီဝလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ရည်ညွှန်းအမှတ်အဖြစ်အသုံးပြုပါသည်။ ဒါဟာအန်ဒရိုဂျင် receptor မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ခညျြနှောငျနိုငျပါနှင့်ဆီးကျိတ်နှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက်အန်ဒရိုဂျင် receptor ၏ဆှဖှေဲ့တံဆိပ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
လေ့လာရေးအစားအသောက်နှင့်အတူတစ်ဦးပါးစပ်ဟို Steroid တစ်မျိုးယူပြီး၎င်း၏ bioavailability လျော့ကျစေခြင်းငှါပြသခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအချို့တို့သည်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းကနေသူ့ရဲ့စုပ်ယူမှုလျှော့ချ, undigested အစားအသောက်ကောင်ဆီဥနှင့်ပျော်ဖို့ခွင့်ပြုနိုင်သည့် Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်း၏ဆီဥကိုတွင်ပျော်ဝင်နေသောသဘာဝကြောင့်ဖြစ်ပွားပါသည်။ အများဆုံးအသုံးချဘို့, ရော် Methyltrienolone အမှုန့်တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်ယူသင့်ပါတယ်။
ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့် (965-93-5) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့်
ဓာတုအမည် METRIBOLONE; Methyltrienone; 17A-methyl-TRENBOLONE; Metribolone; Methyltrenbolone (Metribolone)
အမှတ်တံဆိပ် NAmE ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့်
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား steroids; intermediate & Fine ဓာတုပစ္စည်း; ဆေးဝါး; trenbolone စီးရီး
CAS အရေအတွက် 965-93-5
InChIKey CCCIJQPRIXGQOE-XWSJACJDSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C19H24O2
မော်လီကျူး Wရှစ် 284.39
အရည်ပျော် Point 170 °
ချက်ပြုတ် Point 485.9 mmHg မှာကို C ° 45.0 ± 760
ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့် Application ထဲကဓာတုပစ်စညျးလေ့လာမှုများအဘို့အတွက်စသည်တို့ဇီဝလှုပ်ရှားမှုများအတွက်ရည်ညွှန်းအမှတ်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအန်ဒရိုဂျင် receptor မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ခညျြနှောငျနိုငျပါနှင့်ဆီးကျိတ်နှင့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက်အန်ဒရိုဂျင် receptor ၏ဆှဖှေဲ့တံဆိပ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့် (965-93-5) ကဘာလဲ?
Methyltrienolone အစဉ်အဆက်ကိုထုတ်လုပ်အင်အားအကောင်းဆုံးပါးစပ်ဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်အေးဂျင့်ပါးစပ်အုပ်ချုပ်ရေးအဘို့အခွင့်ပြုရန် alkylated က c-17 alpha ခဲ့သည့် trenbolone (trienolone) ၏ဆင်းသက်လာသည်။ ဤသည်ပြုပြင်မွမ်းမံသည်၎င်း၏ Non-methyl ဝမ်းကွဲထက်သိသိသာသာအားကောင်းသော Steroid တစ်မျိုးဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။ မီလီဂရမ် methyltrienolone ဘို့ဟိုနှင့်အန်ဒရိုဂျင် effects.120 300 မီလီဂရမ်ကြားက သာ. ကြီးမြတ် dissociation ဆေးများလိုအပ်, စီးပွားဖြစ်စျေးကွက်အပေါ်ကိုရောင်းမဆိုအေးဂျင့်ထက်ပိုပြီးတက်ကြွ Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နှင့်အတူ၎င်း၏အာနိသင်, methyltestosterone ၏ထက်ဘယ်နေရာမှာမဆို 535-536 ကြိမ်ကနေ သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်တိုင်းတာလျက်ရှိသည် အားကြီးသောဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုသတိထားမိဖို့တစ်နေ့လျှင် .5-1 မီလီဂရမ်သကဲ့သို့နည်းနည်း။ ၎င်း၏အာနိသင်သာသာဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသန၏ရန်၎င်း၏ခေတ်သစ်အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ထားသည့်သို့သော်ယင်း၏ဆွေမျိုးအဆိပ်အတောက်များကလိုက်ဖက်နေသည်။
ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့် (965-93-5) အကျင့်ကိုကျင့်
Methyltrienolone, အစာအိမ်အက်ဆစ်များက metabolized လုပ်ပြီးချေဖျက်ခံရပြီးနောက်အန်ဒရိုဂျင် receptor များရောက်ရှိနှင့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်သူတို့နှင့်အတူချည်နှောင်။ အန်ဒရိုဂျင်ဟိုသက်ရောက်မှုထုတ်လုပ်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းအခြေခံအားဖြင့်အထီးလိင်ဟော်မုန်းဖြစ်ကြသည်။ ဤအဟော်မုန်းကဤဟိုသက်ရောက်မှုအန်ဒရိုဂျင် receptor များဖြစ်ကြသည် generate ကိုကူညီပေးပါသောမူလတန်း tool ကိုဒီနေရာမှာသတိပြုပါ။ သူတို့ကကြွက်သားထုထည်နှင့်ခွန်အား၌တိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအများအပြားဗီဇလှုံ့ဆော်ခြင်း။
testosterone (ထိုများစွာသောအန်ဒရိုဂျင်၏တဦးတည်း) သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်ပြုပြင်တာဝန်ရှိသည်သော့ချက်ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ အန်ဒရိုဂျင် receptor များခန္ဓာကိုယ်ကဒီလျှို့ဝှက်ချက်ဟော်မုန်းဖို့သင့်လျော်စွာတုံ့ပြန်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ testosterone ကဤ receptors နှင့်အတူချည်နှောင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍရှိရာအရိုးကြွက်သားဆဲလ်တွေအထိရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
Methyltrienolone, ပြင်းပြင်းထန်ထန်အန်ဒရိုဂျင် receptor များနှင့်အတူ binding အသုံးပြုပုံဖြင့်ကြွက်သားထုထည်နှင့်ခွန်အား၌လာဘ်ဆောင်ရွက်မှုတွေ, testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုကိုချွတ် set ကူညီပေးသည်။
ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့် (965-93-5) သောက်သုံးသော
ကျွမ်းကျင်သူများကဒီဟို Steroid တစ်မျိုး၏အနိမ့်ဆေးများကိုယူရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။ အထိရောက်ဆုံးအကွာအဝေး 0.5mg မှ 2mg အကြားဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ဆေးထိုးတဦးတည်းထိုးအကြောင်းကို3နာရီလေ့ကျင့်ခန်းမတိုင်မှီခေါ်ဆောင်သွားခံရခြင်းနှင့်အတူ 4-1.5 အစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားရပါမည်။ ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ်, methyltrienolone ဟာအလွန်အားကောင်းတဲ့မူးယစ်ဆေးနှင့်အပေါ် overdosing သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, အနိမ့်နှင့်သင့်သံသရာတိုတောင်းသင့်ရဲ့ဆေးများကိုစောင့်ရှောက်။ methyltrienolone သံသရာ၏စံကြာချိန် 6-8 ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အရင်ကဆိုရင်အဘို့, ကတိုတောင်းဆိုလိုသည်မှာ4ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ပင်လျော့နည်းသံသရာကြာချိန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အကြံပေးသည်။
သုတေသနပြုလုပ်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအာဟာရစုပ်ယူမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်ဆိုလိုသည်မှာအစားအသောက်နှင့်အတူ methyltrienolone ယူပြီး bioavailability လျှော့ချနိုင်သည်ကိုဖော်ပြသည်။ လျှော့ချ bioavailability ကနေရရှိလာတဲ့အဆိုပါ undigested အစားအသောက်အဆီဖြစ်လျှင်ဤ Steroid တစ်မျိုး၏ဟိုသက်ရောက်မှုဆီးတားလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, အများဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကိုရဖို့ရန်, ငါတို့သည်သင်တို့တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်အပေါ်ယူအကြံပေးလိမ့်မယ်။
ကုန်ကြမ်း Methyltrienolone အမှုန့် (965-93-5) ကိုအသုံးပြုခြင်း
Methyltrienolone မျိုးစုံကြိုးခံစားခှငျ့မြားနှငျ့အင်အားအကောင်းဆုံးဟို steroids တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတွင်ဒီမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူစက်ဘီးနေချိန်မှာသင်တွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မည်ဟု key ကိုအကျိုးခံစားခွင့်များစာရင်းကိုဖွင့်:
(1) ဒါဟာ aromatize မထားဘူး။ ဒါဟာအီစထိုဂျင်သို့ပြောင်းပါဘူးဆိုလိုသည်။ အီစထိုဂျင်ရင်သားကင်ဆာဖွံ့ဖြိုးသောဟော်မုန်းဖြစ်ပြီး, အမျိုးသမီးအတွက်ရာသီနှင့်မျိုးပွားမှုသံသရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကဒီမှာသတိပြုပါ။ ထို့ကြောင့်အီစထိုဂျင်သို့ပြောင်းကြောင်းဟော်မုန်းယောက်ျားအတွက် gynecomastia ဆိုလိုသည်မှာကျယ်ဝန်းရင်သားရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ထို့ပြင်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မြင့်မားတဲ့အီစရိုဂျင်အဆင့်ဆင့်ကိုလည်းနှလုံးရောဂါနှင့်ဆီးကြိတ်ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒီမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူစက်ဘီးစဉ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမယ့်သင်ကအီစထိုဂျင်သို့ပြောင်းပါဘူးသကဲ့သို့သင်တို့အားလုံးဒီကနေဘေးကင်းလုံခြုံပါတယ်စိတ်မပူပါနဲ့ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်အီစထိုဂျင်သို့ပြောင်းပါဘူးအမျှ (2), ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေမလိုချင်တဲ့ရေဖျက်သိမ်းရေးအားဖြင့်ရေ retention ကိုကနေဘေးကင်းလုံခြုံအသုံးပြုသူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်။ ထို့ကြောင့်, သင်တစ်ဦးအစားအသောက်များတွင်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေစဉ်ကသုံးနိုင်သည်။
(3) ဒါဟာသိသိသာသာကြွက်သားခိုင်မာသောတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း။ ဒါကအားလုံးမဟုတ်ဟို steroids လုပ်နေတာနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်တစ်ခုခုပါပဲ။ အတော်များများကစတီရွိုက်ကြောင့်နဲ့အတူကြွက်သားခိုင်မာသောမှကြွက်သားအကျိုးအမြတ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးပေမယ့်အလွန်နည်းပါးခဲပြသပါ။ Methyltrienolone ကြွက်သားခိုင်မာသောအာမခံတဦးတည်း Steroid တစ်မျိုးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဟာပိုမိုအားကောင်းကြည့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Steroid တစ်မျိုးနှင့်အတူစက်ဘီးစဉ် (4) သငျခွန်အား၌သိသိသာသာတိုးတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့သက်လုံနှင့်အာဏာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ယလေ့ကျင့်ခန်းအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းသင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သင်မကြာခဏပိုပြီးကြာကြာလေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
(5) ဒါဟာသွေးကြောတိုးပွားစေပါသည်။ အားကစားသမားသို့မဟုတ်ကာယဗလမယ်ဖြစ်ခြင်း, သင်ကျိန်းသေသင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေပိုပြီးချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပေးရထင်ရှားတဲ့အလွန်မြင်နိုင်သွေးပြန်ကြောချင်လိမ့်မယ်။
(6) ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်သည်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာစက်လီးစီးခြင်းခိုင်မာတဲ့ပါးစပ် steroids2မှ3၏ထပ်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, အလွန်သေးငယ်သောပမာဏအတွက်ပင်၎င်း၏စားသုံးမှုအစုလိုက်အပြုံလိုက်နှငျ့ခှနျအားကြွက်သားအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးစေပါတယ်။
Buyaas.com ထံမှ Methyltrienolone အမှုန့်ကိုဝယ်
ကုန်ကြမ်း Trenbolone အမှုန့် (10161-33-8)
ကုန်ကြမ်း Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) အမှုန့် (23454-33-3)
ကုန်ကြမ်း Trenbolone Enanthate အမှုန့် (10161-35-8)
ကုန်ကြမ်း Trenbolone Acetate အမှုန့် (10161-34-9)